Fanehoan-javatra efa sy tsy efa - Wikipedia
Fanehoan-javatra efa sy tsy efa
(tonga teto avy amin'ny Fanehoan-javatra efa)
Ny fanehoan-javatra efa sy ny fanehoan-javatra efa dia fanehoan-javatra mampifanohitra asa na toetra nitsahatra amin'ny asa na toetra tsy mitsahatra.
Ny fiteny hebreo dia tsy manana endri-matoanteny mifandray amin'ny fotoana afa-tsy ny endriky ny efa sy ny endriky ny tsy efa, ka ataon'ny fitsipiteny mahazatra ho filazam-potoan' ny fiteny hebreo izany.
Fanehoan-javatra efa[hanova | hanova ny fango]
Ny fanehoan-javatra efa dia milaza fa tapitra tateraka ilay asa na toetra lazain'ny matoanteny ka efa mihoatra ara-potoana ny fangitra voafaritra ka noho izany tsy misy intsony, nefa ny vokany no mety mbola ho eo. Matetika mifangaro amin'ny fanehoan-javatra mifintina ny fanehoan-javatra efa ao amin'ny fiteny tsy manana marika hanavahana izany. Amin'ny fiteny frantsay dia ireo mari-potoana misy matoanteny mpanampy (avoir na etre) no maneho izany.
Fanehoan-javatra tsy efa[hanova | hanova ny fango]
Ny fanehoan-javatra tsy efa dia milaza fa tsy tapitra ilay asa na toetra lazain'ny matoanteny ka mbola tsy mihoatra ara-potoana ny fangitra voafaritra. Matetika mifangaro amin'ny fanehoan-javatra mivelatra ny fanehoan-javatra tsy efa ao amin'ny fiteny tsy manana marika hanavahana izany. Amin'ny fiteny frantsay dia ireo mari-potoana tsotra (tsy misy matoanteny mpanampy) no maneho izany.
Fanehoan-javatra mitohy sy tsy mitohy
Fanehoan-javatra mifetra sy tsy mifetra
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fanehoan-javatra_efa_sy_tsy_efa&oldid=979504"
Voaova farany tamin'ny 11 Janoary 2020 amin'ny 13:56 ity pejy ity.